Puntland oo si yaab leh uga hadashay Dagaalkii Shalay+COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Puntland oo si yaab leh uga hadashay Dagaalkii Shalay+COD
Maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal khasaare badan geystay oo shalay Gelinkii dambe ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug.
Wasiirka Howlaha guud iyo guriyeynta Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Dagaalka uu dhexmaray Shacabka Puntland iyo Kooxo uu nabad diid ku tilmaamay oo Dagaalka soo qaaday, isagoona sheegay inay dib u riixeen.
“Dagaal saf ballaaran ah oo illaa xagal Sagaashan ah bay nabad diidka nagu soo weerareen, waan iska difaacnay waxaana ku guuleysannay inaan dib u celinno, cid walbo oo nabadda diiddan haddii ay tahay Al-shabaab ama Galmudug annaga nabad diid baan u naqaannaa” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Cabdirashiid ayaa waxa sidoo kale sheegay in uu khasaare kala duwan uu geystay dagaalkii Shalay gelinkii Dambe ka dhacay Magaalada Gaalkacyo, Xili u sheegay inay guulo ka gaareen Dagaalka.
Wasiir Xirsi ayaa ugu dambeyn sheegay in Puntland ay iska difaaci doonto cid walbo oo deegaannadooda weerar kusoo qaadda.
Dagaalkii Shalay Gelinkii dambe ka dhacay Gaalkacyo oo ahaa kii ugu coslaa Dagaaladii sedaxdii Todobaad ee ugu dambeeyey ka socday Gaalkacyo ayaa geystay Khasaarihii ugu badnaa ee labada dhinac soo kala gaaray.